Zapzapmath ကျောင်း: K-6 ဂိမ်းများ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Zapzapmath ကျောင်း: K-6 အားကစားပြိုင်ပွဲ
Zapzapmath ကျောင်း: K-6 အားကစားပြိုင်ပွဲ APK ကို
► App Store မှာ 197 အနှံ့နိုင်ငံပေါင်းအပေါ် 160 ကြိမ် Featured
ကလေးတွေအတွက် FUN သင်္ချာ
Zapzapmath ကျောင်းတစ်သင်္ချာစွန့်စားမှုအပေါ်အဆင့်6မှသူငယ်တန်းအတွက်ကလေးတွေဆောင်တတ်၏, 180 သင်္ချာ subtopics ဖုံးအုကြောင်း 180 ဂိမ်းများကိုကျော်တစ်ကွဝဠာကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ကစားသမားများကွဲပြားခြားနားသောဂြိုလ်ဖို့ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သင်္ချာသဘောတရားကျွမ်းကျင်ဖို့သူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြပေးသောစိန်ခေါ်မှုများအမျိုးမျိုးဖြည့်စွက်, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစံချိန်စံညွှန်းများ-aligned အပေါ်ပျော်စရာရှိခြင်းနေစဉ်, ဂိမ်း-based သင်ယူမှုပလက်ဖောင်း!
မိဘနှင့်ဆရာများကိုယ်တိုင်က FOR လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ
မိဘတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆရာမအဖြစ်, သင်က web ဒိုင်ခွက်, သူတို့ play အဖြစ်သင့်လေးတွေ '' သင်ယူမှုတိုးတက်မှုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီရင်ခံစနစ်ရယူသုံးစွဲပါ။ အစီရင်ခံစာများဆရာအကောင့်အောက်မှာကျောင်းသားကစားသမားများအတွက်မိဘအကောင့်များနှင့်စုပေါင်းအောက်မှာနေသောကစားသမားများအတွက်တစ်ဦးချင်းအပေါ်အခြေခံထုတ်လုပ်ပြီးနေကြသည်။
Zapzapmath ကျောင်းရဲ့အခမဲ့ download အဆင့် 20 မှသူငယ်တန်းကိုဖြတ်ပြီး6သင်္ချာဂိမ်းတစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်တကွကြွလာ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အခမဲ့အစမ်းခံစားခဲ့လျှင်, တန်းခြင်းဖြင့်အကြောင်းအရာအပြည့်အဝအကွာအဝေးတစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းအခြေခံပေါ်မှာ $ 9.99 မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ တစ်ဦးက Zapzapmath ကျောင်း subscription ကိုသူတို့ရဲ့တန်းအပေါငျးတို့သဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုဆိတ်သငယ် access ကိုပေးသည်။ Download များနှင့်ယနေ့ Zapzapmath ကျောင်း subscribe!
တစ်ခုချင်းစီကိုသင်္ချာခေါင်းစဉ်4ကျွမ်းကျင်မှုဒေသများသို့ကွဲပြား►: သင်တန်း, တိကျပြတ်သားမှု, မြန်နှုန်းနှင့်မစ်ရှင်
►ကစားသမားသူတို့ရဲ့အရေးပါအတှေးအချေါ, ယုတ္တိဗေဒနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုလေ့ကငျြ့, အခက်အခဲတွေတိုးလာအဆင့်ဆင့်ကတဆင့်တိုး။
ကလေးတွေကိုသင်္ချာသင်ခန်းစာတွေ, အိမ်စာ, ဒါမှမဟုတ်ကျူရှင်အစည်းအဝေးများမှတစ်ဦးဖြည့်စွက်အဖြစ်ကစားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်►မျက်နှာပြင်အချိန်ကိုကောင်းစွာသုံးစွဲနေသည်။
►ဝဘ်ဒိုင်ခွက်ကနေတဆင့်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ကလေးတွေ '' တစ်ဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်စစ်မည်နှင့်အပိုလမ်းညွှန်မှုလိုအပ်ပါသည်ဘယ်မှာကြည့်ပါ။
အကွာအဝေး: အဆင့်6မှသူငယ်တန်း
Zapzapmath ကျောင်းအပါအဝင်စနစ်တကျ, module တစ်ခု-oriented ထုံးစံ၌အပျတျောမူသင်္ချာခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြည့်စုံအကွာအဝေး, ဖုံးလွှမ်း:
Zapzapmath ကျောင်းရဲ့ဂိမ်းလည်း Bloom ရဲ့ taxonomy အပေါ်အခြေခံပြီးကျွမ်းကျင်မှုစဉ်းစား Higher-အလို့ငှာတိုက်တွန်းပါသည်။
အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်လည်ပတ် - www.zapzapmath.com
facebook.com/ZapZapMathApp - အမေရိကန် LIKE
Us Follow - twitter.com/ZapZapMathApp
အမေရိကန်အကြောင်းဖတ်ရန် - blog.zapzapmath.com
ZAPZAPMATH ကျောင်း SUBSCRIPTION စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
$ 9.99 တဦးတည်းတန်းမှပရီမီယံ access များအတွက်တစ်နှစ်►
စာရင်းသွင်းထားသောကုန်ဆုံးမတိုင်မီ Auto-သက်တမ်းတိုးအနည်းဆုံး 24 နာရီကိုပိတ်ထားသည်မဟုတ်လျှင်သင့်စာရင်းပေးသွင်းထားကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။
သက်တမ်းတိုးမူရင်းကြေးပေးသွင်းကဲ့သို့တူညီသောကုန်ကျများနှင့်ငွေပေးချေသက်တမ်းတိုးအတည်ပြုချက်ကိုအပေါ်သို့သင်၏ Google အကောင့်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
သင့် Google Account Settings ကိုသွားအားဖြင့်ဝယ်ယူပြီးနောက်မည်သည့်အချိန်တွင်မ Auto-သက်တမ်းတိုးကို turn off စခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်ပြန်အမ်းဟူသောဝေါဟာရကိုမဆိုအသုံးမပြုဘို့ပေးတော်မူမည်မဟုတ်ပါ။
အထက်စျေးနှုန်းအမေရိကန်ဖောက်သည်များအဘို့ဖြစ်၏။ အခြားနိုင်ငံများတွင်စျေးနှုန်းကွဲပြားစေခြင်းငှါ, စွဲချက်သင်၏ဒေသသုံးငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ညွှန်းပေးပါ:
Zapzapmath School မှာကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တိုးတက်အောင်နေကြသည်; ဒီ update ကိုသူတို့အားတိုးတက်မှုအဖြစ်အချို့သောအသေးစားဘာဂ်အချို့ပါဝင်သည်။ ဒီကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကူညီပေးသည်အဖြစ်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်စွန့်ခွာပါ
Zapzapmath ကျောင်း: K-6 အားကစားပြိုင်ပွဲ
63.67 ကို MB
Visual သင်္ချာ Interactive မှ
Duck အားဖြင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဘင်ဂိုကစား ...